Waraabiyeyaasha Ilkaha ugu Fiican | Midkee la iibsanayaa? Fikradaha, Qiimaha iyo Isbarbardhigga
Waraabka ugu Fiican
Afka B Oxyjet
jet biyaha afka b
Waraabka la qaadi karo
Waterpik WP 300 Socdaal ah
Ma doonaysaa inaad natiijooyinka ugu fiican ka hesho Nadaafadda Ilkaha? Iska ilow cadayashada caadiga ah ama suufka oo bilow isticmaalka Wariyaha Ilkaha. Waa kuwo wax ku ool ah, badbaado leh, fududahay in la isticmaalo waxayna ku badbaadin karaan booqashooyin badan oo dhakhtarka ilkaha ah.
Halkan waxa aad ka heli doontaa xogta ugu dhamaystiran oo aan eex lahayn ee waraabayaasha afka: Isbarbardhigga, falanqaynta, ra'yiga iyo qiimaha ee moodooyinka iyo noocyada ugu fiican si aad u dooran karto midka ku habboon baahiyahaaga iyo miisaaniyadaada. Ha lumin faahfaahinta oo hel dhoola cadeyntaada ugu fiican!
Isbarbardhigga Waraabaha Afka ee ugu Fiican
Is barbar dhig sifooyinka ugu muhiimsan ee miisaska ugu fiican ama qalabka aan xadhiga lahayn markaad eegto labadan miis.
Isbarbardhigga Waraabaha Miiska ugu Fiican
Cirridka xasaasiga ah
Cadaadiska ugu badan
Isbarbardhigga Waraabaha Safarka ugu Fiican
No. 1 ee Iibka
Summada hormuudka ah
wp-300 oo socotada ah
Batari dib loo dallaci karo
Cadaadiska ugu badan.
Isbarbardhigga Waraabaha Ilkaha
Waraabaha Afka ee ugu Fiican
Waa maxay Waraabaha Afka?
Waa kee Wariyaha Ilkaha ee la iibsanayo?
Waa maxay Waraabaha Ilkaha ee ugu Wanaagsan?
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira boqollaal nooc oo suuqa ah, laakiin kuwani waa kuwa 10 ka waraabiyeyaasha afka ee ugu fiican (desktop iyo laptop) iyo kuwa ay ugu cadcad yihiin isticmaalayaasha Isbaanishka:
Waterpik WP-100 - Alaabta...
Tilmaamo heer sare ah:
10 Heerarka Cadaadiska ilaa 100 Psi
7 Madax Ku Jira
Qalab gaar ah oo afka qalaad lagu dhejiyo, Orthodontics, iwm.
360 digrii caarad wareeg ah
650 ml oo kayd ah
Inkasta oo aanay ahayn nooca ugu sarreeya ee shirkadda, WP-100 waa kan waraabiyaha ilkaha ugu iibinta fiican dalkeena sanado badan.
Hydropulsor-kan waxa iska leh summada adduunka ugu horraysa ee nadaafadda afka ay ku taliyaan dhakhaatiirta ilkuhu, waxay leedahay shaabadda ADA (Ururka Ilkaha ee Maraykanka) iyo waxtarkeeda ayaa ahaa cilmi ahaan loo xaqiijiyay.
Tilmaamahaagu waa kulmaan baahida isticmaale kasta, gaar ahaan maadaama ay ku jirto nozzles ee dhammaan baahiyaha.
Waterpik WP 100 Falanqaynta
Waraabaha biyaha ee Waterpik Ultra ...
Nadiifinta iyo duugista cirridka shaqada
El WP-660 waa taladayada kuwa raadinaya waraabka tayo leh oo aad u dhammaystiran oo leh qiime la hagaajiyay. Waxay ku jirtaa kala duwanaansho qiimo dhexdhexaad ah, waxay ka timid astaanta hormuudka ah iyo qeexitaankeeda iyo qalabkeeda ayaa aad ugu fiican isticmaal kasta.
Hydropulsor-kan ayaa leh Heerarka awoodeed ee kala duwan, nozzles ee dhammaan noocyada baahiyaha iyo teknoolojiyadda ugu wanaagsan ee shirkadda leh shatiyada ugu badan ee suuqa.
Waterpik WP 660 Falanqaynta
Wariyaha Ilkaha ee Oral-B Oxyjet...
5 Heerarka Cadaadiska ilaa 51 Psi
4 Madax Ku Jira
600 ml oo kayd ah
Tignoolajiyada Bubble Microbubble
Darbiga ama Buurta Miiska
30 maalmood oo maxkamad ah
Braun waxa uu ka dhisay sumcad wanaagsan aduunka nadaafadda ilkaha iyo Waraabayaashooda ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu wanaagsan suuqa.
El Oxyjet by braun waa iibiyaha ugu fiican oo u taagan inuu yeesho nidaamka nadiifinta wuxuu isku daraa jet biyo ah cadaadis iyo hawo la safeeyey, taasoo ka dhigaysa kooxda a doorasho aad u fiican oo loogu talagalay dadka cirridka xasaasiga ah.
Guud ahaan, waa qalab aad u dhamaystiran isticmaalayaashuna way ku qanacsan yihiin natiijooyinka ay bixiso. Waxaa xusid mudan taas cadaadiska ugu badan ayaa ka hooseeya inta badan qalabka, laakiin laga bilaabo Oral B waxay nagu wargaliyeen inay habboon tahay marka loo eego waxbarashadooda.
Aquapik 100 - waraabiyaha ilkaha
10 Heerarka Cadaadiska ilaa 130 Psi
Si toos ah u xidhidh
5 Sano Garanti
Haddii aad leedahay miisaaniyad adag, maahan inaad ka tagto waraabiyaha afka ee wanaagsan maadaama ay jiraan fursado dhowr ah oo suuqa yaala kuwaas oo qiimahooda ay gaari karaan dhammaan miisaaniyadaha. Waxaan rabnaa inaan muujino qaabkan ay haystaan tixraac user aad u wanaagsan yaa isku dayay iyo waxa ay bixiso 5 sano damaanad
Aquapik oo ka socda astaanta Oralteck Usa waa ADA shahaado, waxa uu leeyahay tilmaamo aad u fiican, qalabka ugu dhamaystiran iyo a qiimaha dhabta ah ee la hagaajiyay marka loo eego tartanka.
Aquapik 100 Falanqaynta
Nidaamka Biyaha Pro-HC
Waraabiyaha Afka ama Ilkaha...
5 Heerarka Cadaadiska ilaa 75 Psi
11 Madax Ku Jira
1100 ml oo kayd ah
Hydropropeller-ka kale ee dhaqaale ee ka sarreeya inta kale waa qalab calaamad ah Pro-HC, gaar ahaan ah QIIMAHA NIDAAMKA BIYAHA, taas oo aan sidoo kale ku falanqeynay mareegahayaga.
Waa shey in Way ka sarreeyaan dhammaan tirada madaxyada lagu daray iyo hawlgalkeeda aasaasiga ah laakiin waxtarka leh oo fudud. Marka lagu daro hagaajinta nadaafadda afka, waxay leedahay laba madax waraabka sanka.
Nidaamka Biyaha Qiimaynta Qiimaynta
Waterpik 450- Waraabaha afka
2 Heerarka Cadaadiska ilaa 75 Psi
210 ml oo kayd ah
Inkasta oo ay qiimihiisu ka sarreeyay celceliska, wp-450 Waa mid ka mid ah kuwa ugu iibinta badan biyaha-biyoodka la qaadi karo ee dalkeena. Sifooyinkeeda oo dhammaystiran iyo khibradda astaanta ayaa ka dhigaysa khamaar ammaan ah.
Wuxuu ka sarreeyaa celceliska gudaha tayada wanaagsan ee alaabta, awoodda weyn ee taangiga, madax-bannaanida batteriga dheeraad ah iyo in ay ku jiraan nozzles gaar ah loogu talagalay in lagu dhejiyo iyo kuwa lafaha.
Waterpik 450 falanqaynta
Panasonic EW1211W845 Waraabiyaha
Cadaadiska ilaa 85 Psi iyo 1400 garaac daqiiqaddii
3 nooc (Hawada CAADIGA AH, HAWADA SOFT, JET)
2 Madax Ku Jira
130 ml oo kayd ah
Ugu fiican Panasonic irrigators Waxay yihiin moodooyinka baytari iyo waraabiyaha afka ee aan xadhiga lahayn waa mid ka mid ah aaladaha leh qiimaha ugu tayada wanaagsan ee suuqa. Tani waxay u dhigtay sidii mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu wanaagsan dalkeena, ka sarreeya xitaa waterpik.
Waa qalab leh awood wanaagsan iyo saddex nooc oo hawlgal ah oo u oggolaanaya in la helo natiijooyin aad u wanaagsan xagga nadaafadda afka. Khasaaraha kaliya ee marka la barbardhigo moodooyinka kale waa awoodda hoose ee taangiga, taas oo u baahan in la buuxiyo marar badan.
Wax badan ka arag waraabiyeyaasha ilkaha Panasonic
Waterpik WP-300 Socdaal ah
BIYAHA SOO QAADASHADA - BIYAHA SOO XUL WP300 ...
3 Heerarka Cadaadiska ilaa 80 Psi
450 ml oo kayd ah 60 ilbiriqsi
Naqshad is haysta
Sida magaceeda ka muuqata, WP 300 waa nooc ka mid ah desktop oo leh nashqad iyo astaamo fududeynaya in la qaado meel kasta oo aan u socdaalno.
Tan waxay u leeyihiin la dhimay baaxadeeda waxayna u qaabeeyeen qaabkaas waxaa lagu kaydin karaa boorso yar oo safar oo ay ku jirto.
Waxay sidoo kale leedahay waafaqsanaanta shabkada korantada ee wadamo kala duwan, taas oo ka dhigaysa beddel wanaagsan oo la qaadi karo oo ka duwan moodooyinka batteriga.
Falanqaynta Socdaalka Waterpik
Oral-B 2 gudaha 1
Oral-B PRO 3000 - Saldhig ...
Sida for 2-in-1 waraabiyeyaasha afka oo leh waraabiye iyo burush ilko hogaamiyaha aan la isku khilaafin waa nooca hydropulsor Afka-B. Isla xirmada waxaan ku haynaa a calaamad hormuudka caday koronto iyo hydropulsor si loo sameeyo waraabka afka ka dib cadayashada kasta.
Sidoo kale ma rabno inaan iloobo nooc kale oo 2-in-1 ah oo aan falanqeynay, the Waterpik WP900. In kasta oo aanay caan ku ahayn isticmaaleyaasha, haddana waxa soo saara shirkadda leh waraabiyeyaasha ilkaha ee ugu wanaagsan suuqa.
Haddii aadan weli haysan burushka cadayga ee korontada ku shaqeeya, waa ikhtiyaarka ugu fiican ka hel nadaafadda ilkaha oo dhamaystiran guriga.
Sowash: Waraabiyaha qasabada oo aan lahayn matoor
SOWASH Waraabka Ilkaha...
Ma rabtaa xoojiye aan mooto lahayn oo aan buuq samayn oo aan isticmaalin tamarta korontada? Sowashku wuxuu leeyahay ku dhawaad ​​100 ra'yi iyo celcelis celcelis ahaan 4.2 ka badan 5 isticmaalayaasha iibsaday.
qiimihiisu wuu ka hooseeyaa moodooyinka kale ee ku xidhan tuubada oo ka sarreeya oo ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican iyo kuwa ugu qiimaha badan.
Hadda waxaa jira boqolaal nooc oo noocyo kala duwan ah oo leh astaamo, naqshado iyo qiimayaal kala duwan. Tani waxay adkeynaysaa in mid kasta loo doorto waraabiyaha afka ee wanaagsan.
Waxa ugu muhiimsan ee ku jira hydropulsor waa in ay waxtar leedahay baabi'inta bakteeriyada iyo haraaga cuntada ee ku hadhi kara godka afka ka dib marka la cadaydo.
Laga bilaabo saldhigan, waxaa jira tilmaamo ka sii muhiimsan oo gaar ah, sida goobaha cadaadiska ama awoodda taangiga, iyo kuwa kale oo aan khuseynin sida naqshadeynta ama heerka codka.
Hagaha Doorashada Waraabaha Afka ee ugu Wanaagsan
Kuwani waa sifooyinka ugu muhiimsan in la tixgeliyo si aan kuu doorto waraabiyaha ugu fiican:
Marka hore, Inta badan waa in la doorto model desktop ah leh bam koronto, laakiin waxaa jira dad door bida a Waraabiyaha ilkaha la qaadi karo si aad ugu qaadato safaradaada ama xitaa mid aan matoor lahayn.
Cadaadiska iyo Qaababka Qubeyska Ilkaha
Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee na siinaya nadiifinta saxda ah waa awoodda iyo tayada jet-biyoodka. Taladayadu waa in la doorto moodooyinka leh awooda ugu sareysa ee suurtogalka ah laakiin mar walba la hagaajin karo, si ay u awoodaan in ay ku hagaajiyaan baahidayada. Awood sare laakiin aan sharciyeysnayn waxay dhib u noqon kartaa dadka qaarkood.
Ka sokow awoodaha kala duwan, sidoo kale waxaa jira diyaarado biyo ah oo kala duwan iyo qalabyada leh suurtogalnimada in la doorto hababka kala duwan ee isticmaalka. Waxaa jira diyaarado leh garaac badan daqiiqadii, diyaarado taga qaso xumbo hawo iyo xataa squirter habka duugista.
Noocyada qaar cabbirka haanta Kuma filna in la sameeyo nadiifin dhamaystiran, markaa waa inaad dib u buuxisaa wakhti inta lagu jiro. Tani waxay marka hore u muuqataa mid aan muhiim ahayn laakiin waqti ka dib waxay noqon kartaa xanaaq, gaar ahaan haddii ay aad u yar tahay oo aad u baahan tahay inaad buuxiso dhowr jeer isticmaal kasta.
Marka laga soo tago af-fureyaasha caadiga ah ee ilko caafimaad qaba, waxaa jira af-fureyaal gaar ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha isticmaala lafaha ama kuwa leh tallaalka ilkaha. Haddii aan rabno inaan helno natiijooyin wanaagsan, waxaan kugula talineynaa inaad tan ku xisaabtanto markaad dooranayso waraabka ugu fiican.
Waxa kale oo xusid mudan in ay jiraan moodooyin leh nozzles go'an oo leh Muraayado af-rogmi kara oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u gaadho dhammaan meelaha afka.
Helitaanka Qaybaha Spare Parts iyo/ama Agabka
Kahor intaadan dooran hydropulsor waa inaad hubisaa taas ugu yaraan baaluqyo beddel ah ayaa diyaar ah in aad u baahan tahay. Nozzles Kuwani waxay leeyihiin nolol waxtar leh oo dhowr bilood ah iyo waa lagama maarmaan in la beddelo, sida burushka cadayga.
Iibsashada nooc ka mid ah noocyada la aqoonsan yahay waxay dammaanad ka qaadaysaa in agabku ay ahaan doonaan la heli karo muddo dheer.
Heerka Sawaxanka iyo Naqshadda
Inkastoo ay yihiin sifooyin in si toos ah ha u saamayn waxqabadka Waraabiyaha afka, waxaa jira dad muhiimad weyn ka leh labada dhinac. Qaylada lagama maarmi karo waraabayaasha korontada ku shaqeeya, laakiin waa run taas qalabka qaarkood ayaa si qalbi furan kuwa kale. Haddii waxa aad rabto ay tahay wadarta aamusnaanta inta lagu jiro waraabka afka waa inaad doorataa mid ka mid ah moodooyinka aan lahayn matoor kuwaas oo ku xidhan tuubada.
Noocyada kala duwan ee naqshaduhu waa kuwo aad u fiican, awood u leh inay doortaan midabyo kala duwan iyo sidoo kale cabbirro kala duwan. Waxaa jira xitaa qaar ka mid ah riixayaasha benchtop-ka ee loogu talagalay safarka, sida kuwa waterpik wp-300 socotada. Qalabka qaarkood ayaa lagu dhejin karaa gidaarka, wax lagu qadarin karo meelo yar yar.
Waraabaha Ilkaha Qiimaha iyo dammaanadda
Waxtarka waraabka iyo ku qanacsanaanta guud ee isticmaalayaasha ayaa ka dhigan in sannadihii la soo dhaafay ay baahida kor u kacday. Markay baahida kor u kacdo, warshado cusub oo aan tiro lahayn ayaa soo muuqday kuwaas oo suuqa soo galay koobiyada ee noocyada ugu fiican. Noocyadan waayo-aragnimo iyo dammaanad ma laha wax ku oolnimada sida Waterpik, oo ay taageerto ADA oo ku soo cusboonaatay oo rukhsad siinaysay tignoolajiyadeeda in ka badan 30 sano.
Way caddahay in qof kastaa aanu awoodin inuu iibsado moodooyinka ugu fiican ee suuqa, laakiin hay Waraabaha Ilkaha oo jaban taas oo bixisa natiijooyin aad u wanaagsan. Boggayaga internetka waxaad ka heli kartaa in ka badan hal oo leh tayada wanaagsan iyo fikradaha isticmaale ee aad u wanaagsan.
Fikradda isticmaalayaasha kale kuwaas oo tijaabiyey waraabka afka waa tixraac wanaagsan si loo ogaado natiijooyinka ay bixiso. Qof kastaa wuu ka duwan yahay, laakiin hydropulsor-ka leh qiimeyno badan oo helaya calaamad sare oo dhexdhexaad ah uma badna inuu naga niyad-jabiyo.
Fiiri Waraabka Afka ee ugu wanaagsan
Noocyada ugu Wanaagsan Waraabka Afka
Hal tilaabo oo dhan ka sareysa waa Waterpik, hogaamiyaha aduunka irrigators ilkaha leh daraasiin shati iyo cilmi baaris kuwaas oo ayid wax soo saarkooda. In kasta oo ay tahay mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican, maahan ka kaliya ee leh dhiirrigeliyeyaal wanaagsan.
Guji iyaga si aad u hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan noocyada ugu caansan iyo moodooyinkooda ugu fiican:
[su_row] [su_column size = "1/2 ″ bartamaha ="maya "class =""]
Waa maxay Waraabaha Ilkaha?
Waraabiyaha afka ama qubeyska ilkuhu waa si fudud aalad adeegsata a jet garaaca biyaha cadaadisay in laga saaro qashinka cuntada iyo huurada bakteeriyada in waxay diidaan cadayashada maalinlaha ah.
Qaabkan waxaa loo yaqaan waraabka afka oo hel gaadhaan meelaha adag daloolka afka, sida aagagga ilkaha dhexdooda, xariiqda cirridka ama jeebka periodontal.
Sida loo isticmaalo Wariyaha Ilkaha
Dhammaan waraabayaashu waxay leeyihiin nidaam aad isugu dhow waxayna asal ahaan ka kooban yihiin a haanta biyaha, bamka iyo tuubada meesha laga mariyo jetka cadaadiska.
Moodooyinka qaarkood waxay ku daraan horumarin sida nozzles kala duwan, heerar cadaadis oo kala duwan oo la hagaajin karo, iyo xitaa duugista ama ikhtiyaarka caddaynta iliga. Waxaa ka mid ah nozzlesyada kala duwan waxaan ka heli karnaa kuwo gaar ah orthodontics, ee galinta iyo xataa luqadeed.
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Waraabaha Afka
Shakiga caadiga ah ee ku saabsan hydropulsors
Goorma ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo hydropulsor?
Waxay ku habboon yihiin qof kasta kuwaas oo doonaya in ay gurigooda ku helaan nadaafad ilkeed oo ka wanaagsan, sidaas awgeedna ka caawinaya ka hortagga cudurada afka. Uma baahnid inaad wax dhib ah kala kulanto isticmaalkooda, oo waxaa jira xitaa moodooyinka carruurta, laakiin waa in had iyo jeer loo isticmaalo xaaladahan:
Bukaanka leh xargaha ka dhigaya nadiifinta adag
Bukaanka la geliyo ilkaha
Bukaanka qaba cirridka ama periodintitis
Immisa jeer ayaa la isticmaalaa waraabka afka?
Waa la isticmaali karaa ka dib markii cadayga kasta, haddii ay tahay wax ka yar 5 daqiiqo labadii saacadoodba
Biyaha qasabadadu miyay shaqeeyaan?
Waraabka ku shaqee biyaha tuubada caadiga ah, looma baahna in la isticmaalo biyaha macdanta ama la isticmaalo wax lagu daro.
Dad badan ma isticmaali karaan?
ka nozzles waa la isweydaarsan karaa oo guud ahaan waxay leeyihiin midabyo kala duwan, markaa hal hydropulsor waxaa isticmaali kara xubnaha qoyska ee kala duwan.
Ma lagu isticmaali karaa dhaqidda afka?
Inkasta oo aan loo baahnayn, waxaa lagu dari karaa dhaqidda afka saamiga ugu badan ee 1: 1. Laguma talinayo in la isticmaalo waxyaabaha kale ee lagu daro sida bicarbonate ama koloriin.
Noocyada Waraabka Afka
Hadda waan iibsan karnaa saddex nooc qalabka waraabka afka:
Waraabiyaha miiska sare: Waxaad u baahan tahay inaad ku xidho shabakada korantada waana kuwa ugu badan. Sida caadiga ah, waa kuwa bixiya waxqabadka wanaagsan, hababka isticmaalka badan iyo tirada nozzles. Waxay noqon karaan moodallo waraabiyeyaasha fudud ama laba-in-hal, kaas oo sidoo kale lagu daro caday koronto.
Waraabka la qaadi karo: Waa moodallo wireless ah oo lagu daro batari dib la dalacsan karo. Qalabkani waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad rabto inaad ka fogaato guriga ama aad haysato meel yar oo musqushaada ah.
Tuubada waraabiyaha ilkaha oo aan lahayn matoor: Qalabka noocaan ah waa kuwa ugu iibinta yar, laakiin waxay leeyihiin faa'iidooyin. Ku filan si toos ah ugu xidh tuubada iyo mar haddii aysan haysan matoor, uma baahna koronto iyo buuqna ma sameeyaan.
Halkee laga iibsan karaa waraabka afka?
Haddi aad doorato qaabkan ama mid kale Taladayadu waa in aad ka iibsato online gudaha Amazon. Leh Noocyo badan, qiimaha online-ka ugu fiican, raqiis iyo dhoofin degdeg ah oo aad sidoo kale soo celin kartaa wax iibsiga aad dhibaato la'aan. Muddo sanado ah ayaanu la shaqaynaynay, wax dhibaato ahna nama soo marin.
Waraabaha Afka ee Iibinta ugu Fiican
Waxaan kuu sheegnay noocyada ugu fiican ee suuqa, laakiin alaabooyinkani had iyo jeer kuma beegaan iibiyeyaasha ugu fiican. Hoos waxaad ka arki kartaa a Liiska si toos ah loogu cusboonaysiiyay waraabiyeyaasha ilkaha ee ugu iibinta badan xilligan:
Wariyaha Ilkaha ee Oral-B Oxyjet... Eeg astaamaha 21.017 Fikradaha Eeg heshiiska
Waraabiyaha Afka ee la qaadan karo... Eeg astaamaha 11.466 Fikradaha Eeg heshiiska
Waraabiyaha Afka ee la qaadan karo... Eeg astaamaha 5.556 Fikradaha Eeg heshiiska
Apiker Ilkaha Wariyaha... Eeg astaamaha 10.990 Fikradaha Eeg heshiiska
Waraabka Ilkaha Afka Eeg astaamaha 524 Fikradaha Eeg heshiiska
TUREWELL Waraabka afka,... Eeg astaamaha 3.431 Fikradaha Eeg heshiiska
Ugu fiican	Wariyaha Ilkaha ee Oral-B Oxyjet...
Tayada qiimaha	Waraabiyaha Afka ee la qaadan karo...
Waxaan jecel nahay	Waraabiyaha Afka ee la qaadan karo...
Apiker Ilkaha Wariyaha...
Waraabka Ilkaha Afka
TUREWELL Waraabka afka,...
05 / 08 / 2019 at 00: 50
Halkeen ka iibsan karaa fiilada birta ah ee waraabiyahayga waterpik ????
07 / 08 / 2019 at 09: 03
Hello Maria. Ma aadan sheegin qaabka aad u baahan tahay inuu ku caawiyo. Si kastaba ha noqotee, shabakadda internetka waxaad marin u heli kartaa xogta adeegga farsamada ee astaanta Spain.
17 / 12 / 2019 at 11: 14
Maqaal aad u dhamaystiran!! Waxay xitaa sheegaan waraabiyaha ilkaha ee kuwa ku xira tuubada 🙂 (waan jeclahay iyaga). Waxaan isticmaalay sidaas dhaq oo runtu waa tayada ... si joogto ah tan iyo markii biyuhu ka soo baxay iyada oo la xidhiidha tuubada iyo waxyaabaha kale. Kuwa idinka mid ah oo aad u jecel waraabiyeyaasha ilkaha tuubada, waxaa jira noocyo kale oo ka wanaagsan So Wash, sida Kler ..., Ban ...
Si aad ugu raaxaysato waraabayaasha oo ha ilaawin inaad u tagto dhakhtarka ilkaha waqti ka waqti in hal shay uusan ka qaadin kan kale 🙂
17 / 12 / 2019 at 14: 32
Aad baad u mahadsantahay Ana, waxaan ku dadaaleynaa inaan abuurno ujeedo iyo nuxur tayo leh. salaan
Ka masuulka ah xogta: AB Internet
Waraabaha Jimcaha Madoow
Waraabiyaha ilkaha 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka